Ciidamo doonyo watay oo xalay gaaray dekeda degmada Baraawe
Dekeda degmada Baraawe ee Gobolka Sh/hoose ayaa la soo sheegayaa iney xalay gaareen ciidamo hubeysan oo gaaraya boqol askari kuwaasoo labo doonyood.
Ciidamada ayaa la sheegay iney ka tirsan xoogaga taabacsan Col. Barre Aadan Shire (Barre Hiiraale), iyagoo ka soo ambabaxay degaanka Goobweyn oo 11km u jirta Magaalada Kismaayo.
Gudoomiyaha Gobolka Sh/Hoose ee dowladda C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii), ayaa xaqiijiyay jiritaanka ciidamada Barre Hiiraale, ee gaaray Dekeda Degmada Baraawe.
Siidii ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ku saabsan sababaha keenay in ciidankan ay degmada Baraawe yimaadaan
C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii) ayaa xusay in Ciidamada AMISOM ee degmadaasi ku sugan, ay soo weydiisteen in jawaab laga soo bixiyo, waxay yihiin xoogaga doomaha ku yimid Baraawe.
Dhinaca kale, sarkaal ka tirsan ciidamada Barre Hiiraale oo la hadlay VOA isagoo ku sugan degaanka Goob-weyn ayaa beeniyey in ciidamo iyaga ka tirsan ay gaareen degmada Baraawe..